အသက် ၃၀ အောက် အောင်မြင်နေသူအမျိုးသမီးများပြောတဲ့ အောင်မြင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ - For her Myanmar
အသက် ၃၀ အောက် အောင်မြင်နေသူအမျိုးသမီးများပြောတဲ့ အောင်မြင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ
Career, Relationships>Letters From the Heart>Motivation
Forbes မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပြောတဲ့…
Forbes မဂ္ဂဇင်းက နှစ်စဉ်တိုင်း အသက်သုံးဆယ်အောက် အောင်မြင်သူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစာရင်းထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ အောင်မြင်သူ ၅ ဦးက သူတို့ရဲ့ ဘဝနဲ့ယှဉ်ကာရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှု သော့ချက် (၅) ခုကို အခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
၁။ အများကြိုက်ဖို့ထက် ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်ပါ
ဂီလ်ဒါ အမ်ဘရိုစီယို ဟာ တွဲဖက်တစ်ယောက်နဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့ အဝတ်အစား Brand တစ်ခုကို အသက်သုံးဆယ်အောက်မှာတင် အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သူပါ။
သူတို့ရဲ့ Brand ကို စတင်မိတ်ဆက်ချိန်က ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ပြီး လူအများနှစ်သက်တဲ့ ပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို မစူးစမ်းခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ နှစ်သက်ခံစားရတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို တီထွင်ဖန်တီးကာ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် “ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရိုးသားခဲ့တာလို့ အခုလို အောင်မြင်ခဲ့တာပါ” လို့ ဂီလ်ဒါ က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂။ မတွေဝေနဲ့ လုပ်သာလုပ်ပါ
ကွင်းန် ရှာပတ်ဟာ အသက် ၁၅ နှစ် လောက်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ၂၃ နှစ် အရွယ်မှာ ရုပ်ရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးသားထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မ ငယ်ငယ်က ကျောင်းဆက်တက်တာထက် ကျွန်မဝါသနာပါရာကို စလုပ်ဖို့အတွက်ပဲ အားသန်နေခဲ့တာ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလို ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခုလို အောင်မြင်ခဲ့တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ခါတရံတော့ သေသေချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လုပ်သင့်သလို တစ်ခါတရံတော့လည်း မစဉ်းစားဘဲလုပ်၊ လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ သင်ယူသွားတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။
Related article >>> လုပ်ငန်းသစ်(Startup)တွေမှာ လုပ်မလား၊ အောင်မြင်ပြီးသားလုပ်ငန်းတွေကို ရွေးချယ်မလား
၃။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်အတွက် လေ့လာသင်ယူပါ
ဒယ်နီရယ်လီ ဂီယူဇီယို ဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးကတည်းက စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ရှာဖွေပြီး ကော်ဖီဆိုင်မှာမနားတမ်းဖတ်ရှုပါတော့တယ်။ သူ မှတ်သားလိုတဲ့ အရာတွေဆိုရင် ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကာသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
သူ ဒီလို လေ့လာသင့်ယူခဲ့လို့ အခုဆိုရင် သူဟာ အသက် ၃၀ အောက်မှာပဲ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဖတ်မှတ်လေ့လာသင်ယူပါ။
၄။ ကိုယ့် စိတ်ဆန္ဒကို ယုံကြည်မှုရှိပါ
လီဇာ ကိုရှီ တစ်ယောက် YouTube ပေါ် ဗီဒီယိုအတိုလေးတွေတင်မယ်ဆိုတော့ လူတစ်ဦးက ကန့်ကွက်ပါတယ်။ YouTube က ခေတ်ကုန်တော့မှာ လို့ ထိုသူက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လီဇာ ကာ နားမယောင်ပဲ သူ့ဆန္ဒအတိုင်းသာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် လီဇာက YouTube မှာ အောင်မြင်သူတစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။
၅။ ပြဿနာတွေအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါ
ဒန်နီ ရိုချီဟာ Kastor & Pollux ဆိုတဲ့ ဖန်တီးမှု အေဂျင်စီတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားသူပါ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာ မဆန်းတော့ပါဘူး။
“နေ့တိုင်းက စိန်ခေါ်မှုပေါင်းစုံထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကြီးလိုပါပဲ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့၊ အတွက် တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက် နဲ့ စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုက မဖြစ်မနေလိုအပ်တာမို့ ခက်ခဲပါတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ မျှဝေခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းညွှန်တွေပါပဲ။ ယောင်းတို့တွေလည်း သူတို့တွေကို အတုယူပြီး အောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်လာကြပါစေလို့။
Forbes မဂ်ဂဇငျးမှာ ဖျောပွခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးတှပွေောတဲ့…
Forbes မဂ်ဂဇငျးက နှဈစဉျတိုငျး အသကျသုံးဆယျအောကျ အောငျမွငျသူမြားစာရငျးကို ထုတျပွနျလရှေိ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီစာရငျးထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ အောငျမွငျသူ ၅ ဦးက သူတို့ရဲ့ ဘဝနဲ့ယှဉျကာရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှု သော့ခကျြ (၅) ခုကို အခုလို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
၁။ အမြားကွိုကျဖို့ထကျ ကိုယျကွိုကျတာကိုယျလုပျပါ
ဂီလျဒါ အမျဘရိုစီယို ဟာ တှဲဖကျတဈယောကျနဲ့အတူ အောငျမွငျတဲ့ အဝတျအစား Brand တဈခုကို အသကျသုံးဆယျအောကျမှာတငျ အောငျမွငျအောငျ လုပျနိုငျခဲ့သူပါ။သူတို့ရဲ့ Brand ကို စတငျမိတျဆကျခြိနျက ဈေးကှကျသုတသေနလုပျပွီး လူအမြားနှဈသကျတဲ့ ပုံစံက ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတာကို မစူးစမျးခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ နှဈသကျခံစားရတဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေို တီထှငျဖနျတီးကာ အောငျမွငျခဲ့တာပါ။ဒါကွောငျ့ “ကြှနျမတို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျရိုးသားခဲ့တာလို့ အခုလို အောငျမွငျခဲ့တာပါ” လို့ ဂီလျဒါ က ဆိုခဲ့ပါတယျ။
၂။ မတှဝေနေဲ့ လုပျသာလုပျပါ
ကှငျးနျ ရှာပတျဟာ အသကျ ၁၅ နှဈ လောကျကတညျးက ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှရေေးသားခဲ့သူဖွဈပွီး လကျရှိ ၂၃ နှဈ အရှယျမှာ ရုပျရှငျတှေ ကိုယျတိုငျဖနျတီးရေးသားထုတျလုပျနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။“ကြှနျမ ငယျငယျက ကြောငျးဆကျတကျတာထကျ ကြှနျမဝါသနာပါရာကို စလုပျဖို့အတှကျပဲ အားသနျနခေဲ့တာ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီလို ကွိုးစားခဲ့တယျ။ အခုလို အောငျမွငျခဲ့တယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။တဈခါတရံတော့ သသေခြောခြာစဉျးစားဆုံးဖွတျပွီးမှ လုပျသငျ့သလို တဈခါတရံတော့လညျး မစဉျးစားဘဲလုပျ၊ လုပျရငျးနဲ့ပဲ သငျယူသှားတာမြိုး လုပျသငျ့ပါတယျ။
Related article >>> လုပျငနျးသဈ(Startup)တှမှော လုပျမလား၊ အောငျမွငျပွီးသားလုပျငနျးတှကေို ရှေးခယျြမလား
၃။ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့ အလုပျအတှကျ လလေ့ာသငျယူပါ
ဒယျနီရယျလီ ဂီယူဇီယို ဟာ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးကတညျးက စီးပှားရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စာအုပျတှကေို ရှာဖှပွေီး ကျောဖီဆိုငျမှာမနားတမျးဖတျရှုပါတော့တယျ။ သူ မှတျသားလိုတဲ့ အရာတှဆေိုရငျ ဖုနျးကငျမရာနဲ့ ရိုကျကာသိမျးဆညျးထားပါတယျ။သူ ဒီလို လလေ့ာသငျ့ယူခဲ့လို့ အခုဆိုရငျ သူဟာ အသကျ ၃၀ အောကျမှာပဲ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးရှငျ အမြိုးသမီးဖွဈနတောပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ပတျသကျတာတှကေို ဖတျမှတျလလေ့ာသငျယူပါ။
၄။ ကိုယျ့ စိတျဆန်ဒကို ယုံကွညျမှုရှိပါ
လီဇာ ကိုရှီ တဈယောကျ YouTube ပျေါ ဗီဒီယိုအတိုလေးတှတေငျမယျဆိုတော့ လူတဈဦးက ကနျ့ကှကျပါတယျ။ YouTube က ခတျေကုနျတော့မှာ လို့ ထိုသူက ဆိုပါတယျ။ဒါပမေဲ့ လီဇာ ကာ နားမယောငျပဲ သူ့ဆန်ဒအတိုငျးသာ လုပျခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ လီဇာက YouTube မှာ အောငျမွငျသူတဈဦးဖွဈနပေါပွီ။
၅။ ပွဿနာတှအေတှကျ ပွငျဆငျထားပါ
ဒနျနီ ရိုခြီဟာ Kastor & Pollux ဆိုတဲ့ ဖနျတီးမှု အဂေငျြစီတဈခုကို တညျထောငျထားသူပါ။ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ လုပျငနျးရှငျဖွဈနတေဲ့ သူ့အတှကျ စိနျချေါမှုတှဆေိုတာ မဆနျးတော့ပါဘူး။“နတေို့ငျးက စိနျချေါမှုပေါငျးစုံထညျ့ထားတဲ့ အိတျကွီးလိုပါပဲ။ ကြှနျမအနနေဲ့ ဒီပွဿနာတှကေို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးဖို့၊ အတှကျ တညျငွိမျတဲ့ စိတျခံစားခကျြ နဲ့ စိတျအာရုံစူးစိုကျမှုက မဖွဈမနလေိုအပျတာမို့ ခကျခဲပါတယျ” လို့ သူက ဆိုပါတယျ။
Tags: entrepreneur, Forbes, Motivation, secrets, successful women
ဒါတွေကို (၁)မိနစ်အတွင်း ဖြေနိုင်ရင် ယောင်းက Mr.Chef ဝင်ပြိုင်လို့ရပါပြီ !
Sugar Cane March 13, 2019
ဘယ်အကျင့်ဆိုးတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုမရအောင် ဆွဲချနေတာလဲ?
Sugar Cane April 29, 2019
အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့ ခွန်အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် သီချင်းကောင်း (၅) ပုဒ်
Hnin Ei Oo March 29, 2019